“Jibba Tigiraayi irratti qabdan sirreessiisaa ykn biyya of dandeesseedha jechuun labsaa,” Dr Dabratsiyoon – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Jibba Tigiraayi irratti qabdan sirreessiisaa ykn biyya of dandeesseedha jechuun labsaa,” Dr Dabratsiyoon
Gochi dhimma Itoophiyaa gidduu galuu mul’atuu fi jibbi Tigiraayi irra jiru kan hin sirroofne yoo ta’e, ”Tigiraayii biyya of dandeesseedha jechuun labsuu qabduu jechuun bakka bu’oota ummataatiif ergaa dabarsan Dr Dabrastiyoon Gabra Mikaa’eel.
(bbcafaanoromoo)–TPLF ergaa kana kan dabarse sirna kabaja hundeeffama dhaaba TPLF waggaa 45ffaa sababeeffachuun qophaa’eerratti haasaa har’a taasisanii ture.
Pirezidaanti itti aanaan Naanno Tigiraayi Dr Dabrastiyoon ergaa miseensoota bakka bu’oota ummataa Tigraayi bakka bu’aniif dabarsaniin, ”barri aangoo keessanii dhumaa waan jiruuf osoo hin bittinaanyiin dura seenaa hojjadhaa.
Jidduu galuumsa dhimma Itoophiyaa keessatti ta’aa jiruu, keessattuu Tigiraayiin ilaalchisee haasaawwan jibbiinsaafi farra ummataa sadarkaa hoggansaatiin taasifame ifatti balaalleefadhaa,” jedhaniiru.
Itti dabaluunis, ”kuni kan hin taanee yoo ta’e ammoo Tigiraayi biyya of dandeesse ta’ushee murteessaatii labsaa,” jedhan.
”Adeemsa biyya diiguurra jirtu jedhamtanii seenaan akka hin gaafatamneef, itti gaafatamummaa keessan bahaa,” jechuun ummataaf ergaa dabarsaniiru.
TPLF bara qabsoorra tureetti, ”Sirna Dargii kuffiisuuf jecha ijoolleen Tigraafi Eeritiraa boolla tokkotti waliin kufaniiru,” kan jedhan Dr Dabrastiyoon, walabummaa Eeritraatiin boodas taanaan ummanni Tigiraayiifi Eeritiraa bilisummaa ummata Eeiritiraatti ejjannoo duubatti hin jennee waan qabataniifu mormiin siyaasaa isaan mudatulleen ejjannoosaa irraa akka hin goriin himaniiru.
Erga waraana biyyoota lamaaniin boodas osoo nageenyi hin bu’iin dura buqaattoota Eertiraa ”hammachuun dahoo ta’uun” ummata Eeritiraatiif michuu ta’uu dhugaa baheera jedhan.
Waldhabdee tura hiikuuf qophaa’aa ta’usaanii kan dubbattan Dr Dabrastiyoon, walitti fufiinsa ummataatiif jala muruun xiyyeeffannaa kennaniiru.
”Motummaan kan darbuudha kanaafuu nageenya keenya walitti fufsiisuuf ummattoota jidduutti marii itti fufsiisuu qabna,” jedhan.
Ummattoota Tigraayiifi Eeritiraa jidduutti wal fakkeenyi afaaniifi aadaa, seenaa waliinii akkasumas dhiigaan kan walitti hidhaman ta’unsaanii, ummattoonni kunneen kan waraanaaf wal barbaadan akka hintaane cimsuun himaniiru.
”Humnootiin ummattoota Eeritiraafi Tigraay gara waraanaattii dhiibaa jiran jiru. Adeemsa nageenyaa eegalame haala dhaabbatummaatiin hiikuun ala, ajandaa siyaasaa isaanii ittiin dhokfachuuf itti fayyadamaa jiru” jedhan.
Ummanni Tigraayi obbooleessa isaa kan ta’e ummata Eeritiraa waliin walitti bu’iinsa keessa galuuf kaayyoo homaa hin qabu kan jedhan Dr Dabrastiyoon, kaayyoon biyyoota lamaan gara waraanaatti galchuuf adeema jiruu jiraachuus hin dhoksine.
Daandiiwwan biyyota lamaan wal qunnamsiisan cufamuun, akkasumas dhaabbileen buufata lammiilee Eeritiraa Itoophiyaatti argaman akka cufaman taasifamuun, fi baqatoota haaraan akka hinsimatamne gochuun ”daba motummaa Eeritiraafi Itoophiyaatiin ta’eedha” jedhan.
Itti dabaluunis ”rakkinni ummata Eeritiraa rakkina keenya waan ta’eef karri isiniitti cufamu hin jiru. Tigiraayi biyya keessan. Waraanni Eeritiraa Tigiraayi biyya keeti. Daba siyaasaa hojjatamaa jiru waliin haa fashalleessinu” jedhaniiru.
Bobbaasuu loltootaa biyyattii keessatti bakkeewwan adda addaatti taasifamaa jiruufi miidhaa kanaan wal qabatee qaqabaa jiruuf itti gaafatamaan jiraachu qabaata kan jedhan Dr Dabrastiyoon, garuu kan dubbattan waa’ee waraana kamiifi miidhaa kamii akka dubbatan kan ibsan hin jiru.